Sambo Fiaran’i Noa. BNL Ministries - mg40
Andriamanitra sy ny andian-dahatsoratra ara-tantàra.
Ny toerana nisy ny Sambofiaran'i Noa.
Maro ny mpanadihady nitady ny toeran’ny Sambo Fiaran’i Noa, anisan'izany ny maro izay nilaza nahita izany, kanefa hita fa fitaka.
Hoy ny Baiboly... "Ary nitsahatra ny Sambo-fiara tamin'ny volana fahafito, amin'ny andro fahafito ambin'ny folo tamin'ny volana, teo amin'ny tendrombohitra tany Ararata."
Ny andininy faha-5 mitohy, "Ary ny rano dia mbola nihena niandalana hatramin'ny volana fahafolo, tamin'ny andro voalohany amin'ny volana, ary ny tampon'ny tendrombohitra dia hita."
Tamin'ny fotoana nipetrahan’ny Sambo Fiara, Mt Ararata dia tsy ny volkano tahaka amin'izao fotoana izao. Ny antony dia satria ny tendrombohitra tsy hita hatramin'ny 2 volana sy tapany tatỳ aoriana, fa amin'ny toeran’ny Sambo Fiara amin'izao fotoana izao, Mt Ararata dia mitsangana 5,164 metatra eo ambonin'ny ranomasina, dia hita mazava tsara.
Avy eny amin’ny habakabaka ny Mt Ararata dia hita vao haingana kokoa nohon’ ny tendrombohitra niorenany. i.e. ny tendrombohitra manodidina dia sisa netin’ny riaka na ranomandry (sédimentaire), Ny Mt Ararata dia volkanika.
Ny Baiboly dia tsy milaza fa ny Sambo Fiara dia nipetraka teo amin’ny Mt Ararata, fa tany amin’ny tendrombohitra amin'io faritra io.
Ny toerana nipetrahan’ilay Sambo Fiara dia tokony ho 30km atsimon'i Mt Ararata, akaikin'ny sisin-tanin'i Torkia sy Iran, ary tsy lavitra amin'ilay vohitra atao hoe Güngören. Izany dia eken’ny governemanta Tiorka toy ny toeran’ny Sambo fiara, ary dia misy fanoroana làlana amin’izany. (Nuh’s Ark). Nuh dia ny anaran’i Noa amin’ny Kaldeana (Babyloniana).
Sambo Fiaran’i Noa?.
Ara-jeografika mila amin’ny teboka iray ny amin’ity zavatra ity. (N= Avaratra, E= Atsinanana)
N 39.26.475 E 44.14.108
Fanadihadiana tao amin’ny Toerana nisy ilay Sambo fiara.
Fanadihadiana Manetika. (Magnetic Test)
Ny manetômetatra (magnetometer) dia fitaovana izay mandrefy ny sahan'andriamby ny Tany. (Izany no tokony ampiasaina ahitana ny toeran’ny sambo any ambanin’ny ranomasina, izay ny metaly dia somary manolana kely ny sahan'andriamby ka mamela ny toerana mba ho hita.)
Ny fitsirihina tamin’ny Magnetometer no nahitana ny faritra manodidina ny toerana nisy ny Sambo Fiara, nampiseho fiolakolanana, midika izany fa misy vy ao.
Fitiliana amin’ny Radara.
Ireo fanadihadiana ireo dia mampiseho rehefa misy fiovàna mitranga eo amin'ny hakitroka (densité). Izany dia mampiseho modely mahazatra, tsipika mirazotra, sy tsipika miampita, toy ny mety hita amin'ny rindrina hazo sy ny rairainy amin’ny firafitry ny sambo.
Fanadihadiana amin’ny alalan’ny karazana (échantillon).
Ny santionany sasany dia naneho ny fisian'ny sisa tavela tamin’ny hazo, ampahan’ny tandroka dera, miaraka amin'ny volony izay efa fantatra toy ny an'ny saka, (Leopard) izay tsy teraka teo amin’ilay faritra. Misy ihany koa ny sisa tamin’ny fantsika izay manana endrika efajoro. Izany dia noheverina fa azo tamin’ny famakiana ilay manômetatra.
Fanadihadiana amin’ny alalan’ny Sary.
Natao ny fampitahana tamin'ny sary avy eny amin’ny habakabaka sary izay nalaina tamin’ireo fanadihadiana samihafa. Ireo dia milaza fa ny tany manodidina dia nihotsaka nidina ny tendrombohitra. Ny momba ny Sambo Fiara ao amin’ireo sary ireo, na izany aza, dia tsy nifindra, ary vao mainka hita tsara. Ny velarany sy ny habeny dia mahatonga azy tsy nihetsika tamin’ny toerany.
Fanadihadiana ny zavatra hita.
Ny lavan'ny Sambo-fiara dia 157,1244 metatra. Ny haben'ny Sambo fiaran’i Noa araka ny voalaza ao amin'ny Baiboly, Genesisy 6:15, Ary toy izao no hanaovanao azy: hakiho telon-jato ny lavan'ny sambo-fiara, hakiho dimam-polo ny sakany, ary hakiho telo-polo ny hahavony. Ity habeny ity dia marina mihitsy, raha ny Royal Ejiptiana hakiho (524mm) no ampiasaina, mba hikajiana ny lavany.
Stabilization (Tsy fihetsehana) - Vatofantsika vato.
Tsy lavitra ny toerana misy ny Sambo fiara dia misy vato maro, izay mahitsy tokoa ny fipetrany. Ireo dia nofaritana ho toy ny vato vatofantsika.
Ny vatofantsika vato dia vato lehibe, malalaka amin’ny lafiny iray, tery amin'ny hafa, miaraka amin'ny lavaka eo amin'ny tampony, mamela azy io mba ho azo fatorana amin’ny tady. Ny fahabetsahan’izy ireo no mampitombina ny sambo amin'ny onja lehibe mety ho andrasana. Metatra vitsivitsy ny haavony (2,4m na mihoatra), lehibe lavitra noho ny vato vatofantsika izay hita an-davanandro.
Kilaometatra maro (120km na mihoatra) ihany koa no miala amin'ny ranomasina akaiky indrindra na ranomasimbe.
Noa dia mety namaha tsikelikely izany, mba hamela ny Sambo fiara mba handroso ambony kokoa ao amin'ny rano mandra-pahatongany.
Inona no manaraka.
Io toerana io dia mila fandinihana bebe kokoa, amin'ny fandavahana, amin'ny dingana manaraka, mba hamaritana ny anton’ireo refy mahaliana izay azontsika.
Replica ny sambofiaran'i Noa.
Misy dika mitovy habe feno sambofiaran'i Noa ao amin'ny Famoronana Tranombakok'i, any Amerika.
Ity dia mampiseho ny fomba fananganana azo atao, sambo izany habeny.
Sary nahazoana lalana...
Mitovy ny habeny.
Modely Ark fitiliana.
Ary Andriamanitra nahatsiaro an'i Noa mbamin'ny zava-manan'aina rehetra, ary ny biby fiompy rehetra izay niaraka taminy tao anatin'ny sambo-fiara; ary Andriamanitra nampandeha rivotra eran'ny tany, ary ny rano nihena;
Ary tampina ny loharanon'ny lalina sy ny varavaran'ny lanitra, ka nitsahatra ilay ranonorana nivatravatra avy tany an-danitra;
Raha tsy mitsara
dia ho voatery
sy Gomora Izy, ary hiala
tsiny amin’izy ireo.